Miverina miaraka amin'ny traikefa vaovao ny Paco's Men | Bezzia
Ny fiverenan'i 'Los Hombres de Paco' akaiky sy akaiky kokoa!
Susana godoy | 04/05/2021 14:00 | ankehitriny
'Lehilahy Paco' izy ireo dia iray amin'ireo andiany mbola mihantona ao an-dohanay. Tamin'ny taona 2005 no nahitantsika sambany ireo polisy telo lahy samy hafa fiainana nefa mpinamana nandritra ny taona maro. Ny zava-niainany, ny fianakaviany ary ny fitiavany na ny ratram-pony dia tsy ho ela dia hampifandray antsika amin'ny efijery kely.
Dimy taona taty aoriana, toy ny zavatra hafa rehetra amin'ny fiainana, dia nifarana izy io. Famaranana izay namela anay haniry bebe kokoa, na dia teo aza ny zava-misy fa maro ny endri-tsoratra nandalo ilay andiany. Ankehitriny dia miverina amin'ny fanahy vaovao izay ho hitantsika tsy ho ela izy Antenna 3!
1 Ny fahombiazan'ny 'Los Hombres de Paco'
2 Firy ny fizaran-taona sy ny fizarana misy an'i 'Los Hombres de Paco'?
3 Feonkira vaovao ho an'ny andiany Antena 3
4 Aiza no ahitantsika ny 'Los Hombres de Paco'?
Ny fahombiazan'ny 'Los Hombres de Paco'
Na dia mitranga amin'ny andiany rehetra aza izy io indraindray, tsy ny vanim-potoana tsirairay avy isaky ny vanim-potoana misy azy ihany no manana fahombiazana mitovy. Noho izany, rehefa mandao azy ny sasany amin'ireo mpilalao azy, angamba ny fihenan'ny mpijery dia mety ho epic. Fa ny marina dia rehefa tonga tany amin'ny fahitalavitra ireo 'olon'i Paco' dia hitany fa niova izany rehetra izany. Nanana ny zavatra rehetra tadiavinay izy ireo ary hatsikana tsara, fotoana mampihetsi-po ary fitiavana izany, mifandraika amin'ilay karazana mpitsongo.. Rehefa nandeha ny fizaran-taona dia nanampy ny tetika efa nisy ihany koa ireo mpilalao vaovao ary nijanona ho zava-dehibe indrindra, miaraka amin'ny tantaram-pitiavana sy fialonana vaovao. Zavatra iray mahaliana ny besinimaro indray. Nandritra izany rehetra izany sy ny maro hafa, nitazona mpijery tsara ity andiany ity ary nitomany fatratra vanim-potoana vaovao ireo mpankafy azy.
Firy ny fizaran-taona sy ny fizarana misy an'i 'Los Hombres de Paco'?
Ny andiany, hatreto, dia manana vanim-potoana 9 ary izy rehetra dia manampy mihoatra ny fizarana 117 fotsiny. Satria tsy ny vanim-potoana rehetra dia mitovy fizarana mitovy. Ny sasany nampifaly anay tamin'ny 14 toy ny nitranga tamin'ny vanim-potoana faharoa, raha ny fahita indrindra dia ny fananan'izy ireo 12 na 13. Teo afovoan'ny areti-mandringana sy ny fitanana am-ponja, aprily 2020 izay nisy ny resaka mety hiverenana. Antenaina hanomboka izany fahavaratra izany raha azo atao. Paco Tous dia sahala amin'ny iray amin'ireo mpilalao voalohany tao. Nefa tao anatin'ny fotoana fohy dia nomena ny anarana malaza indrindra hamoronana ny ekipa nandresy antsika rehetra taloha. Raha ny tena izy, amin'ny fahavaratry ny taona 2020, Michelle Jenner sy Hugo Silva dia hanamafy ny fisehoany amin'ny vanim-potoana vaovao ihany koa.
Feonkira vaovao ho an'ny andiany Antena 3
Niresaka momba ny toa fitahirizana ny mpilalao izahay, noho izany dia ho hitantsika indray ireo mpihetsiketsika lehibe sy vondrona polisy tsy mahay manao politika rehetra, anisan'izany ny kaomisera. Fa raha misy zavatra miova, dia ny feonkira. Ankehitriny dia anjaran'i Estopa, izay miandraikitra ny fampisehoana 'El Madero'. Io ilay hira vaovao izay hanomboka ny vanim-potoana vaovao 'Los Hombres de Paco'. Na dia tadidinao tsara aza ny vondrona Pignoise, dia Estopa izao no handray anjara hanampiana ny feon'ireo andiany mahomby.
Aiza no ahitantsika ny 'Los Hombres de Paco'?
Toa hizara fizarana roa ireo toko 16 vaovao. Fa ho an'ny voalohany, Antenaina ny hanao première ao amin'ny Antena 3, ao anatin'ny fandaharam-potoana Prime Time ary avy eo manohy jerena amin'ny alàlan'ny Atresplayer Premium. Ity no zava-nitranga tamin'ny andian-dahatsoratra sasany izay afaka nahita an-karihary taty aoriana. Fa izay antenaina hitranga dia mitovy amin'ny 'Los Hombres de Paco'. Satria tsy ny rehetra no manana an'ity sehatra ity fa te hahita ny ekipa miaraka indray izy ireo, miady ho an'ny tsara sy mahatadidy ireo fitiavana taloha. Tianao ve ny hamoahana azy izao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Ny fiverenan'i 'Los Hombres de Paco' akaiky sy akaiky kokoa!